कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: कीर्तिपुरमा अलग पहिचान बनाउँदै शीतल एकेडेमी
कीर्तिपुरमा अलग पहिचान बनाउँदै शीतल एकेडेमी
गंगा राम रेग्मी घर धनगढी कैलाली, उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर (एम.ए) पास गर्नु भएको छ । अहिले कीर्तिपुरको नयाँबजारबाट भाजंगल जाने बाटोमा शीतल एकेडेमी स्थापना गरी अंग्रेजी भाषा सिकाइरहनु भएको छ । उहाँसंग अंग्रेजी भाषा कसरी सिक्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गरिएको भलाकुसारी
तपाईंले अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर पास गर्नु र भाषा सिकाउनु अलग्ग विषय भयो । तपाईंले कुनै क्षेत्रमा गई भाषा सिकाई सम्बन्धि तालिम पनि लिनु भएको छ कि ?
—हो, तपाईंले ठिक भन्नुभयो । डिग्रीको सर्टिफिकेटले मात्र अंग्रेजी सिकाउन पर्याप्त हुँदैन । भाषा सिकाई सम्बन्धि तालिम पनि चाहिन्छ । मैले रोजगारीका लागि भारत गएका परिवारका सदस्यहरुसंग भारत बसाईको सिलसिलामा शीतल एकेडेमी मुम्बईमा अंग्रेजीका विज्ञ व्यक्ति (३० वर्ष अंग्रेजी सिकाईको अनुभव) केतन शाहबाट अंग्रेजी भाषा सिकाई सम्बन्धि कोर्ष र तालिम पुरा गरेको छँु । दुई वर्ष भारतमै अंग्रेजी भाषा सिकाइ अनुभव बटुली सकेपछि नेपालमा अंग्रेजी सिकाउन शुरु गरेको हुँ । सरकारी स्कूलमा पढ्दा अंग्रेजीको कमी महशुश भइरहँदा भारतको शीतल एकेडेमीबाट नयाँ प्रविधिद्घारा सहज रुपमा अंग्रेजी सिकिसकेपछि, म जस्तै अन्य नेपालीहरुले सजिलै अंग्रेजी भाषा सिक्न सक्ने महशुश गरी भारतमा अवस्थित शीतल एकेडेमीसंग को सम्बन्धन र सहयोगमा नेपालमा शीतल एकेडेमी स्थापना गरिएको हो ।
नेपालमा अंग्रेजी भाषा सिकाउन थाल्नु भएको कति वर्ष भयो ?
—नेपालमा शीतल एकेडेमी स्थापना गरेर अंग्रेजी भाषा सिकाउन थालेको त ५ वर्ष भयो । पहिले धनगढीमा पढाएँ । त्यहाँ सफलता पाएपछि, त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिहरुले टीकापुर, अत्तरिया, वर्दिया र दाङ गरि काठमाडौं बाहिर ५ ठाउँमा शीतल एकेडेमी संचालन भइरहेको छ । काठमाडौंमा भने कीर्तिपुरमा एउटै मात्र हो ।
यतिका ठाउमा पढाउन तपाईंले कसरी व्यवस्था गर्नु भएको छ ? तपाईंको कतिजना पार्टनरहरु छन ?
—व्यक्तिगत रुपमा अंग्रेजी सिकाउन धेरै जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । शीतलमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरुलाई पहिले अंग्रेजी सिकाएर, क्षमतावान विद्याथीहरुलाई तालिम दिई अंग्रेजी भाषा सिकाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । मलाई अंग्रेजी सिकाउनु भएका गुरुहरुको मार्गदर्शनमा आधारित रहि तालिम दिने गरेको छुँ । म जस्तै, मबाट सिकेका केही विद्यार्थीहरुले आफ्नो स्वयम लगानीमा र केहीले मेरो र मेरा गुरुहरुको हभागीतामा शीतल एकेडेमी चलाईरहनु भएको छ । तर नेपालमा अवस्थित शीतल एकेडेमीहरुको रेखदेख, मुल्याङ्कन र तालिमहरु मैले नै दिने गरेको छुँ ।
तपाईंले अंग्रेजी भाषा सिकाउन कीर्तिपुर नै किन रोज्नु भयो ?
—कीर्तिपुरलाई शैक्षिक धरोहरको केन्द्र नै मानिन्छ । यहाँ नेपालकै ठूलो विश्वविद्यालय हुनु गौरवको कुरा हो । यहाँ सबै जिल्लाका मानिसहरु बसोबास गर्न र पढ्न आउँछन । यहाँ भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटहरु थुप्रै छन । लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन पढ्न आउनेहरु पनि थुप्रै छन । कीर्तिपुर एउटा शैक्षिक हब जस्तै भइसकेको छ । तर यहाँ अलग्ग किसिमले आधुनिक प्रविधि र प्रणालीको प्रयोग गरि अंग्रेजी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्यूटहरु छैनन् । अंग्रेजी सिक्नैका लागि दैनिक खर्च गरेर कीर्तिपुर बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैको अभाव पूर्ति गर्न कीर्तिपुरमा शीतल एकेडेमी स्थापना गरिएको हो ।
तपाईंको एकेडेमीको भाषा सिकाईको तरिका कस्तो छ ?
—हामी अडियो भिजुवल, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी व्यक्तिगत रुपमा अंग्रेजी सिकाउँछौं । सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिगत शिक्षण एकदमै प्रभावकारी उपाय हो । त्यसका साथै अनलाईन मार्फत अन्य ठाउँका शीतल एकेडेमीका विद्यार्थी र शिक्षकहरुसँग कुराकानी गराइन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा गएर अंग्रेजीमा वार्तालाप कसरी गर्ने भनेर सिकाइन्छ । स्पीच कसरी लेख्ने र स्टेजमा गएर कसरी बोल्ने भनेर पनि सिकाइने गरिन्छ । अंग्रेजी शुद्घ बोलिचाली र लेखनमा पनि विशेष जोड दिइने भएकाले विद्यार्थीहरुको स्कूल कलेजको पढाईलाई निकै सहयोग गर्दछ । अंग्रेजी सिकाई सहज बनाउन शुरुमा मातृभाषाका माध्यमबाट सिकाएर त्यसपछि मात्रै पूर्ण अंग्रेजी वातावरणमा सिकाइन्छ । खुशीको कुरा शीतल एकेडेमी कीर्तिपुरमा भर्ना हुनु भएका धेरैजसो विद्यार्थीहरुले अंग्रेजी बोल्न थालिसक्नुभएको छ । चाँडै नै हामी विभिन्न प्रतियोगिताहरु आयोजना गरि विद्यार्थीहरुको अंग्रेजी बोल्ने क्षमतालाई सबै माझ प्रश्तुत गर्नेछौँ ।
तपाईंको एकेडेमीमा पढाई पूरा गरेकाहरुले मात्र पढ्न पाउने कि अन्यले पनि ?
—यहाँ पढ्नको लागि कुनै उमेरको बन्देज छैन । सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेले पनि अंग्रेजी भाषा सिक्न सक्छ । स्कुल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले पनि यहाँ पढ्न सक्छन् । यहाँ पढेपछि बाहिर अन्यत्र अंग्रेजी विषयको ट्यूसन पढिरहनु पर्दैन । स्कुलका कोर्षलाई लक्षित गरि अंग्रेजी सिकाइन्छ । यहाँ भर्ना भएर पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई किताबहरु पनि निशुल्क दिइन्छ ।
तपाईंको कोर्ष कति महिनाको हुन्छ र कति खर्च लाग्छ ?
—हामीकहाँ व्यक्तिगत रुपमा पढाईन्छ । कुनै समयको सीमा छैन । विहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म जुन समय पढ्नका लागि अनुकुल हुन्छ, त्यही समयमा पढ्न पाउनु हुन्छ । दिनको २ घण्टा पढाइन्छ, त्यसभन्दा बढी पढ्न चाहनेलाई पनि सोही शुल्कमा नै पढाइन्छ । थप शुल्क लाग्दैन । ६ महिनाको एकैचोटि पेमेन्ट गर्नु भएमा जम्मा रु. आठ हजार लाग्छ । किस्ताबन्दीमा तिर्ने हो भने ५ हजारको दुई चोटि तिर्नु पर्छ । मतलब दश हजार रुपैया लाग्छ । यसमा कोर्षबुक पनि समावेश गरिएको छ । यहाँ भर्ना हुनु भएका विद्यार्थी कोर्ष पुरा नहुँदै अन्य ठाउँमा जानु प¥यो भने पनि नेपाल र भारतमा शीतल एकेडेमी भएको ठाउँमा कोर्ष पूरा नभएसम्म निशुल्क पढ्न पाउँछ । कोर्ष पश्चात जहिले पनि पछि विर्सेका कुराहरु रिभाइज गर्न आउँदा निशुल्क पढाइने व्यवस्था छ ।
Posted by Jwojalapaweekly@gmail.com at 5:46 AM